HomeArimaha QoyskaErayada Raggu Jecel Yihiin In Ay Ka Maqlaan Gacalisadooda, Waa Kuwo Farxad Galinaya
Dhanka Ninka ayaa ka adag in la fahmo marka loo bar-bar dhigo dhaqanka gabadha, iyada oo ay taxadi tahay in la fahmo waxa uu sarbeebayo ama doonayo marka loo eego in ayna raggu si cad afka uga sheegan waxa ay ka doonayaan gacalisadood.
Inkasta oo ay inta badan Raggu yihiin kuwo fahma jacayla iyo waliba leh qadarin aad u weyn kuna aadan dhanka dumarka hadana waxa ay adagtahay in ay si toos ah u sheegtaan dareenkooda.
Hadaba Waxa aan halkan ku soo bandhigaynaa Ereyo ama hadal ay jecelyihiin in ay ka maqlaan Afka gacalisadooda taas oo galisa kalsooni & Waliba jacayl dheeri ah.
1.Waxa Aan Aaminsanahay Riyadaada:
Mararka qaarkood waxa adag in la fahmo waxa ka dhex guuxaya maskaxda Ninka, sida caadada ah inta badan fikiradooda lama wadaagaan dumarka laakiin gabadha maskaxda badan ayaa garanaysa riyada gacaliyeheeda sidaas darteed waa in ay mar walba kalsooni ugu muujiso in ay diyaar u tahay in ay la wadaagto riyadiisa mustaqbal.
2.Aad Ayaad Ii Farxad Galisaa:
Dadaal aaad u yar ayaa gabadha kaga filan in ay farxad galiso gacaliyeheeda sidaas darteed waa in ay gabadhu samayso talaabooyin yar si ay u farxad galiso gacaliyeheeda xitaa hadii ay tahay dhoola cadayn yar.
3.Maanta Waad Qurux Badantahay:
Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ayna Raggu ka fikirin sida ay u muuqdaan mana daneeyaan in ay inta badan kala hadlaan arintaas laakiin arintaas sax ma ahan Ragga ayaa sidoo kale jecle in loo sheego qaabka ay u muuqdaan taas oo siinaysa dareen xoogan oo dhankaaga ah.
4.Waxa Aad Iiga Qoslisaa Si Aanan Aamini Karin:
Waxa laga yaabaa in ay Raggu mararka qaar qaadaan talaabo la yaab leh laakiin kaliya uga jeedo in uu farxad galiyo gacalisadiisa sidaas darteed waa in ay gabadhu tix galiso dadaalka uu u sameeyay.
Inta badan Ragga ayaa caan ku ah in ay ku jiraan difaac sidaas darteed waa in aad u sheegto in uu yahay qof mar walba kaaga farxiya waxa uu sameeyo.
5.Waxa Aan Marba Joogi Doonaa Agtaada Wax Walba Oo Dhaca:
Mararka qaar waxa uu Ninku u baahan yahay ayaa ah sida aad diyaarka ugu tahay in aad agtiisa joogta wax walba oo dhan taas oo si weyn u farxad galinaysa hadii uu hadalkaas kaa maqlo.